Archive du 20170516
Asan-jiolahy,tsy filaminana Manampahefana maro hoesorina
Nampiantso an�ireo tompon�andraikitra rehetra misahana ny fandriampahalemana eto amintsika toy ny minisitry ny fambolena sy ny fiompiana, ny ministry ny fiarovam-pirenena,
Fanendrena PDS Aleo foanana, hoy ny depiote Djaosera Iren�e
Hodinihin�ny vaomiera misahana ny lal�na sy ny kaomisionin�ny atitany sy ny fanapariaham-pahefana eny Tsimbazaza rahampitso alarobia 17 mey 2017 ireo tolo-dal�na roa naroson�ny solombavambahoakan�i Madagasikara Djaosera Iren�e.
Goaika antitra !
Mitsoka any indray ry Jean ny rivo-baovao a ! Tsy inona izany fa ilay tsio-drivotry ny tanora avy any Lafrantsa, izay mety tsy ho toy ny niseho teto amintsika tany amin�ny 8 taona lasa kosa aloha e !
�Black eyes� any Boeny Hivelatra amin�ny tsena iraisam-pirenena
Tsy mitsahatra mitady izay hananan�ny seha-pihariana fambolena �black eyes� na lojy mainty maso fenitra sy kalitao ara-dal�na mba ahafahan�ity vokatra mampalaza ny faritr�i Boeny ity hifaninana eo amin�ny tsena iraisam-pirenena ny tompon�andraiki-panjakana sy ireo mpisehatra isan-tsokajiny any an-toerana.
Herinandro Lasalianina Niavaka ny tany Ambatondrazaka
Andro miavaka ho an�ny fianakaviam-be lasalianina ny datin�ny 15 mey izay vaninandro nametrahan�ny Papa Pie XXII ho Ray mpiaro ny mpanabe ny Frera Jean Baptiste dela salle. Hetsika tsotra anefa miavaka no nanamarihana izany tao amin�ny Lisea Saint Josefa Ambatondrazaka
Dia hionona izany ?
�Raha vao very tadidy dia mandeha amin�ny lalana tsy izy ary raha vao very tantara dia ho ratsy fiafara�, hoy ny fomba fiteny. �
Sekoly ambony ENAM Hanofana ny DREN sy ny Lehiben�ny Cisco
Notanterahina omaly alatsinainy 15 mey teny amin�ny minisiteran�ny fanabeazam-pirenena Anosy ny fifanaovan-tsonia tamin�ny alalan�ny minisitra Paul Rabary sy ny sekoly ambony manofana ho mpitantana ny raharaham-panjakana (ENAM) tamin�ny alalan�ny talen�io ivontoerana io, Pascal Rabetahina.
Didim-poitra faobe Miala any koa ny fomba Tiorka
Mirotsaka an-tsehatra amin�ny fanaovana didim-poitra faobe eto amintsika ry zareo Tiorka. Zazalahy kely miisa 2.000 no ezahina hahazo tombontsoa manerana an�Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina ka miisa 600 hatramin�ny omaly ireo efa vita. Amin�ny fomba Turc no hanaovana ny fandidiana.
Fikirakirana teknolojia �Big Data� Hovelarina amin�ny sehatra ara-panjakana
Ao anatin�ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena momba ny fifandraisan-davitra sy ireo orinasa miompana amin�izany dia misy ny hetsika homanin-dry zareo avy eo anivon�ny minisitera tompon�andraikitra hampivelarana kokoa ny sehatra ahafahana mikirakira itony teknolojia vaovao itony.
Famatsiam-bola Tsy namana intsony ny Eoropeanina ?
Notokanana omaly alatsinainy 15 mey tetsy amin�ny minisiteran�ny raharaham-bahiny Ampefiloha ny ivontoerana manokana ahafahana mahazo sy mizara ny vaovao rehetra manitikitika mikasika ny fiaraha-miasa eo amin�ny vondrona Eoropeanina sy i Madagasikara.
Kaominina Talatamaty Mazoto mandoa hetra ny mponina
Mahavelom-bolo ny fampidiran-ketra eo anivon�ny kaominina Talatamaty, distrikan�Ambohidratrimo amin�izao fotoana izao.
Trafikana fitaovam-piadiana Basy sy bala 446 saron�ny zandary
Misy miketrika fanakorontanana ve fa tena mirongatra ny trafikana basy sy bala ? Olona 3 indray no saron�ny zandarimariam-pirenena ao amin�ny sampana fikarohana heloka- bevava etsy Fiadanana (SRC).
Tsy hanaiky ny fanodinkodinam-bola eny anivon�ny sekolim-panjakana intsony manomboka izao ny minisiteran�ny fanabeazam-pirenena.